Abafazi | Eyedwarha 2021
Usuku lwaMazwe ngaMazwe loMntwana oyintombazana 2019: Eyona ilungileyo 'Gcina uMntwana oyintombazana' Iziqubulo naMazwi
USuku lwaMazwe ngaMazwe lwaBantwana abangamantombazana lubhiyozelwa minyaka le nge-11 Okthobha ukujongana nemiceli mngeni ejongene namantombazana kwihlabathi liphela kunye nokukhuthaza imfundo yabo, amalungelo oluntu kunye nokulingana. Kule meko, makhe sijonge kwi-12 enamandla okugcina abantwana.
Usuku lweSizwe lwaBantwana abaNtombazana luka-2020: ii-Quotes ezili-10 eziya kukuXhobisa
Qho ngonyaka i-24 kaJanuwari iqatshelwa njengoSuku lwaBantwana loMntwana olungamantombazana ukusasaza ulwazi ngokubaluleka kwabasetyhini ekuhlaleni. Ngale mini sizise iikowuti ezithile eziza kukukhuthaza.
Usuku lwaBasetyhini lwaMazwe ngaMazwe ngo-2021: Nantsi imiyalezo eli-14 emnandi yokwabelana nabafazi
USuku lwaMakhosikazi lwaMazwe ngaMazwe lubhiyozelwa ngomhla we-8 kweyoKwindla minyaka le. Nantsi eminye imiyalezo emnandi onokwabelana ngayo nabafazi abamangalisayo abakungqongileyo.
Usuku lwaMazwe ngaMazwe loMntwana oyintombazana 2019: Umhla, umxholo, Imbali kunye nokuBaluleka
Ngomhla we-11 ku-Okthobha, uSuku lwaMazwe ngaMazwe loMntwana oyintombazana luyajongwa ukuphakamisa ulwazi ngeemfuno zamantombazana kunye nemiceli mngeni abajongana nayo. Umxholo we-2019 woSuku lwaMazwe ngaMazwe lwaBantwana abaNtombazana yiGirlForce: Ayibhalwanga kwaye ayinqandeki.
Isikhumbuzo sokuzalwa kukaSarojini Naidu: Iinyani ezincinci ezaziwayo malunga neNightingle yaseIndiya
USarojini Naidu owaziwa njengeNightingale Of India wazalwa nge-13 ngoFebruwari 1879 e-Hyderabad ukuya kubazali baseBengali. Wayengomnye wabantu ababesaziwa njengabalweli benkululeko ngexesha lomzabalazo wenkululeko wase-India. Funda ezinye iinyani ngaye.
Izinto ezili-10 ekungafuneki ukuba uzixelele umntu wasetyhini ngelixa ekwiXesha lakhe
Kusenokwenzeka ukuba ukhe weva ukuba abantu basetyhini batyhubela kwiinguqu ezingathandekiyo xa bekwixesha labo. Kodwa oko akuthethi ukuba uyakuthetha izinto ezithile kuye njengoku: ukuba ufuna ukubetha abantu okanye ufuna ukukhala ngamehlo. Funda eli nqaku ukwazi okungakumbi.
Usuku lwaMazwe ngaMazwe loMntwana oyintombazana 2019: IiSikimu zikaRhulumente zaBantwana abaNtombazana eIndiya
URhulumente wase-India usungule izikimu ezininzi zomntwana oyintombazana ekuphuculeni ubomi babo. Oku kubandakanya uBalika Samridhi Yojna, uBeti Bachao, uBeti Padhao, uSukanya Samriddhi Yojana, uKanyashree Prakalpa, njl.
Abafazi abasebenzayo banyanzelwa njani ukuba bayeke imisebenzi yabo yomtshato kunye neyabantwana
Kwakukho ixesha apho abafazi babetshatile emva kokufikelela kwiminyaka ethile, kodwa ngoku abasetyhini banezinye izinto eziphambili. Banomsebenzi wabo. Kubo ukuzilungiselela ngokwengqondo kubaluleke ngakumbi kunokufumana into ethile yokutshata.
IGood Doodle ibhiyozela iSikhumbuzo seNoveli sika-Amrita Pritam se-100th
Namhlanje, nge-31 ka-Agasti, uGoogle Doodle ubhiyozela isikhumbuzo seminyaka eli-100 sokuzalwa kombhali wenoveli wasePunjabi ogama linguAmrita Pritam owazalwa ngo-1919 eGujranwala, ePunjab (ePakistan) ngexesha laseBritane eIndiya kutata oyimbongi kunye nomama ongumhlohli wesikolo.
Iinombolo zoncedo lwabasetyhini eIndiya
URhulumente wase-India uza neendlela zoncedo ezinjenge-Women Helpline ezisebenza ekuqinisekiseni ukhuselo nokhuseleko lwabasetyhini. Siqokelele uluhlu lwamanani abantu ababhinqileyo kwi-India apha, onokuyisebenzisa ngexesha lokudinga.
Ngomhla wokuzalwa kukaMama uTeresa, Nazi ezinye zeZicatshulwa zakhe kuThando, uBomi kunye noLonwabo
Umama uTeresa wazalwa ngomhla we-26 Agasti 1910 eSkopje, ikomkhulu leRiphabhlikhi yaseMakedoni. Nazi ezinye zeekowuti zakhe ngothando, ubomi kunye nolonwabo.
I-12 Savage Returnbacks Xa Ubamba amaDoda ajonge ebeleni lakho
Abasetyhini baziva bengonwabanga xa bejonge amabele abo ngaphandle kokuqhwanyaza amehlo. Kodwa olu Suku lwaMazwe lwaMakhosikazi lwaMazwe ngaMazwe, unokwenza ukubuya okukhohlakeleyo ngezi mpendulo zirhabaxa.
I-ISRO i-7 yezeNzululwazi zaBasetyhini emva kweMbali yeNdawo yaseIndiya
Umbutho woPhando lweNdawo yaseIndiya (i-ISRO) ubala ubuninzi bezinto eziphumeleleyo zokumiliselwa kwezobugcisa liqela lobungcali apho amalungu angama-30 epesenti angabafazi abakrelekrele. Makhe sithethe ngala makhosikazi erokethi awayekumiliselo lwe-MOM kunye neChandrayaan.
Usuku lwabazalisikazi lweHlabathi 2020: Yazi malunga neMbali, Umxholo kunye nokuBaluleka
USuku lwaBazalisikazi lwaMazwe ngaMazwe lujongwa nge-5 Meyi rhoqo ngonyaka. Usuku luye lwaqwalaselwa ukwamkela igalelo elixabisekileyo labazalisikazi ekuzaleni nasekunyamekeleni abasetyhini abakhulelweyo. Funda eli nqaku ukuze wazi ngakumbi ngalo mhla.
Ukukhumbula u-Ismat Chughtai kwiSikhumbuzo sakhe sokuzalwa se-104th: Izicatshulwa ezikhuthazayo
Umbhali onobukrakra kunye nowasetyhini, u-Ismat Chughtai akadingi kungeniswa kuncwadi lwesiUrdu. Uzalelwe i-21 ka-Agasti, i-1915, unyaka we-2019 uphawula isikhumbuzo seminyaka eyi-104 sokuzalwa kuka-Ismat Chughtai. Wayehlala ebizwa ngokuba yiGrande Dame yeentsomi zaseUrdu, njengoko wayephembelela intetho yasimahla ngokubhala kwakhe.
Usuku lokuzalwa luka-Indira Gandhi lwe-103: Iinyani ezingaziwayo malunga neNkosikazi yeNkulumbuso yase-India
U-Indira Gandhi wayengumfazi wokuqala kwi-Nkulumbuso yase-India owayesebenza njenge-Nkulumbuso yesibini esebenze ixesha elide. Nguye owayekhokela ukusebenza kweBlue Star kwaye wakwazi ukufumana uloyiso kwimfazwe ye-Indo-Pakistani.
Usuku lwaMazwe ngaMazwe loMntwana oyintombazana 2019: Ukubaluleka kokufundisa uMntwana oNtombazana kuMbutho waseIndiya
USuku lwaMazwe ngaMazwe loMntwana oyintombazana luqwalaselwa nge-11 Okthobha minyaka le. Uxelwe liZizwe eziManyeneyo (i-UN), olu suku lukwabizwa ngokuba lusuku lwaMantombazana kunye noSuku lwaMazwe ngaMazwe lweNtombazana. Umhla wokuqala woMntwana oyintombazana waqwalaselwa ngo-2012.
UVidya Sinha Udlula Kwiminyaka engama-71: I-Biography kunye neNqaku elincinci elaziwayo malunga nalo Mlingisi wamaGqala
UVidya Sinha, ongumlingisi ongumakad 'enetha, waphulukana nedabi lakhe ngenxa yemiphunga kunye nesifo sentliziyo ngomhla we-15 ka-Agasti eMumbai. Usebenze ngaphezulu kweefilimu ezimbini, uVidya wayengoyena mntu wayethandwa kumabonwakude kwaye iindaba zakhe zokufa zaphuma zothusa abalandeli bakhe.
I-Pinkathon Mumbai 2019: Ukusuka eMilind Soman ukuya eTahira Kashyap, eCelebs Cheer Abathathi-nxaxheba babafazi
UMilind Soman ubhengeza umhla wePinkathonathon Mumbai 2019. Kumsitho weGrant Hyatt Hotel, umlingisi kunye nemodeli babhengeza umhla kwaye bakhuthaza abasetyhini ukuba bathathe inxaxheba kolu gqatso.
USara Devi Chaudhurani's Isikhumbuzo sokuzalwa: uMseki woMbutho wabafazi wokuQala eIndiya
USarala Devi Chaudhurani owazalwa njengoSarala Ghosal wayeyinkokeli yowesifazane wokuqala wase-Bengal ukuba athathe inxaxheba kwi-Indian Independence Movement. Kumhla wokuzalwa kwakhe, okt nge-9 Septemba, silapha ukuza kukuxelela ngaye.
njani ukujonga iinwele ezimanzi
Iinyanga ezi-2 isisu esikhulelweyo siziva ngathi
usifumana njani isisu esisicaba kwintsuku ezimbini
i-amavasya Agasti 2019 umhla kunye nexesha
iindlela ezihlekisayo zokuthi ndiyakuthanda
indlela yokufumana ubuso obufanelekileyo emadodeni
indlela yokwenza i-anyanisi unamathele ngeenwele